Golaha Wasiirada oo maanta isku raacay in la dhiso guddi ka shaqeeya isku dhafka ciidanka qaranka “Sawirro” – Radio Muqdisho
Muqdisho, 19, Maarso, 2015….Golaha Wasiiradda Xukuumadda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta isugu yimid shirkoodii caadiga ahaa, waxaan shir gudoominayey ku-simaha Ra’iisul Wasaaraha ahna Wasiirka Cadaaladda mudane Cabdullahi Axmed Jaamac (Ilka jir), waxaana shirka looga hadlay Arrimaha Amniga Dalka, Isku Dhafka Ciidamada Xooga iyo Gudiga Hagida Maamulka Maaliyada,
Ugu horayntii Wasiiirka Amniga ayaa sheegay iney dadaalo badan oo lagu sugayo amniga laga sameeyey caasimada, iyo gobolada dalka, waxaana iska kaashaday ciidamada dowlada iyo kuwa AMISOM. Wasiirka ayaa sheegay iney muhiim tahay wada shaqeyn joogta oo ay yeeshaan hay’adaha dowlada iyo shacabka lagu sugi karo xal u helida arrimaha amnaanka.
Sidoo kale Wasiirka Maaliyada ayaa warbixin ka siiyey habka ay u shaqaynayaan gudiga Maamulka Hagida Maaliyada oo loo xil saaray dabagalka qandaraasayada ay dowladdu bixiso iyo waxyaalaha ay dowladdu soo iibsato.
Wasiirka ayaa sheegay in gudigu uu dib u eegis ku samaynayo qandaraasayadii horay loo galay kuwaas oo qaarkood la ogaaday ineysan dhamaystirnayn, dood dheer ka dib golaha ayaa si KMG ah u ansixiyey inuu shaqeeyo gudiga Maamulka Hagida Maaliyada, inta laga ansixinayo hindise sharciyeedka iibka qaranka oo horyaala baarlamaanka.
Dhanka kale Wasiiru dowlaha Wasaarada Gaashaan dhiga ayaa golaha uga warbixyey halka uu marayo qorsha isku dhafka ciidamada xooga dalka.
wasiirka ayaa xusay in ay hada jiraan ciidamo ku kala firirsan gobolada qaarkood oo mushaar iyo qalba ay siiso wasaarada gashaandhiga. Maleeshiyooyin beeleedyo, iyo ciidamo ay gaar u leeyihiin maamul goboleedyada ka jira dalka, sidaas daraadeedna loo baahan yahay in la mideeyo dhamaan ciidamadaas.
Ugu danbayntii Soo jeedinta wasiirka marka goluhu uu dood ka yeeshay ayaa la ansixiyey dhismaha gudiga isku dhafka ciidamda qaranka in laga soo xulo dhamaan gobolada dalka, si loo helo ciidan qaran,.
Midowga Yurub iyo UN-HABITAT oo Sharaxay Saameynta Mashruuca SECIL ee Muqdisho